Posted by Tranquillus | Jan 21, 2021 | Shabakada
Waxqabadka qayb ka mid ah: helitaanka fasax mushahar leh
Waxqabadka qayb ahaan waxaa la sameeyaa markii shirkadda lagu qasbo inay yareyso ama si ku meel gaar ah u joojiso howlaheeda. Nidaamku wuxuu suurtogal ka dhigayaa in magdhow la siiyo shaqaalaha inkasta oo saacadaha aan shaqeynin.
Xusuusnow in xilliyada shaqaalaha la meeleeyo qayb ahaan loo tixgeliyo inay yihiin waqti shaqo oo wax ku ool ah helitaanka fasax mushahar leh. Sidaa darteed, dhammaan saacadaha aan shaqeynin waxaa lagu xisaabtamayaa xisaabinta tirada maalmaha fasaxa la qaatay ee la helay (Xeerka Shaqada, farshaxanka, R. 5122-11).
ma, ma yareyn kartid tirada fasaxyada mushaharka qaata ee shaqaaluhu u helay sababo laxiriira qeybta.
Shaqaaluhu ma lumiyo maalmaha fasaxa ee mushaharka leh ee la siiyo xilliyada lagu meeleynayo waxqabad qayb ahaan ah.
Waxqabadka qayb ahaan: helitaanka maalmaha RTT
Su'aashu sidoo kale way soo bixi kartaa oo ku saabsan soo iibsiga maalmaha RTT. Ma yareyn kartaa tirada maalmaha RTT sababtoo ah xilliyada waxqabadka qaarkood? Jawaabtu uma sahlana sida helitaanka maalmaha fasaxa ee lacagta la qaato.
Xaqiiqdii, waxay kuxirantahay heshiiskaaga wadajirka ah si loo yareeyo waqtiga shaqada. Jawaabtu way ka duwanaan doontaa hadii la helo RTT
Miyaan xaq u leeyahay in aan yareeyo tirada maalmaha fasaxa mushaharka la qaatay sababtoo ah saacadaha aan ka shaqeynaynin qaybta waxqabadka? July 10th, 2021Tranquillus
READ Iskaashiga iyo wadajirka: amniga internetka waxaa lagu dhisay heer Midowga Yurub
horeWarqad Muunad ah si looga tartamo mushahar bixinta
socdaFasax mushahar leh: Caawinaad aan caadi aheyn oo laga helo taageerada gobolka ee la kordhiyay